Okporo ụzọ E-Bike Manufacturers & Suppliers - China Road E-Bike Factory
SEBIC Ndị okenye obodo ukwu dị elu 36v 48v lithium batrị ụzọ ịnyịnya ígwè ebike
Aluminom Alloy batrị zoro imewe. Suspension siri ike ndụdụ, ọzọ fashionable, mụ na inogide. Igwe ọkụ LCD na mpi na-enye gị ohere ịme njem n'enweghị nsogbu n'abalị.
SEBIC 28 inch hub motor 250w 350w 36v 48v igwe eletriki igwe
N'ihu na n'azụ Hydraulic breeki akara usoro na ike anya na-echebe na sekit na sekit; n'ihu ndụdụ nkwusioru usoro na adịchaghị nkasi obi ujo absorption n'ụzọ dị irè na-ebelata emeghasịkwa na eme dị iche iche ụzọ ọnọdụ. Ọdịdị dị elu Shimano 8-Speed ​​gear, mgbanwe dịgasị iche iche, yana ime mgbanwe nke ukwuu.
SEBIC 700C zoro ezo batrị vintage n'okporo ụzọ obodo igwe eletrik
Isi ihe dị mkpa maka ebi a bụ ịkwọ ụgbọala na nhọrọ ịnwe eriri. Ha nwere uru nke ha, ndị ahịa na-ewu ewu nke ukwuu.